Click on the "ငှေကိုငျစာရေး" အိုင်ကွန်, ကနောက်တော်သို့လိုက် "အပျငှေ" option ကို.
Olorra စီမံခန့်ခွဲမှုလီမိတက်, provides transaction services to SlotsLtd.com - learn more
Instant £; / & ယူရို; / $
Contact &; ထောက်ပံ့: for any issues concerning your credit/debit cards, please contact our support.
Deposit Limit: Minimum: £;/& ယူရို;/$ 10, Maximum: £;/& ယူရို;/$ 700
Deposit Limit: Minimum £;/& ယူရို;/$ 20 , Maximum: £;/& ယူရို;/$ 700
Minimum deposit: & ယူရို; 20.
Instant £;/& ယူရို;/$
Minimum deposit: £;/& ယူရို;/$ 20.
Website: https://www.neteller.com available in multiple languages (Japanese, ဂျာမန်, Danish, စပိန်, ပြင်သစ်, Italian, Turkish, Polish).
Freephone: (+) 800-7767-6343 (Austria, ဘယ်လ်ဂျီယံ, China, ဒိန်းမတ်, Finland, ပြင်သစ်, Germany, Hong Kong, Ireland, အီတလီ, Japan, Macau, Netherlands, Norway, ပေါ်တူဂီ, Singapore, စပိန်, Taiwan, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
Contact &; ထောက်ပံ့:
Live phone support at (+44) 870 383 0232 Monday - Sunday 9:00 - 18:00 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်.
Fax: ဗြိတိန်နိုင်ငံ 0870 922 3274, ယူအက်စ်အေ 509 271 5556, Germany 032 211 0899 0014, Netherlands 020 524 8418, ပြင်သစ် 01 5301 0809, International (+1) 509 271 5556 သို့မဟုတ် (+44) 870 922 3274.
Deposit Limit: Minimum &euro; 20, Maximum: & ယူရို; 5000
Deposit Limit: Minimum &euro;/$20, Maximum:& ယူရို;/$5000
Deposit Limit: Minimum £;/& ယူရို;/$20, Maximum:£;/& ယူရို;/$5000
If you have any problems with depositing funds, don't worry, you can contact one of our highly trained Customer Service ;representative ;between 7:00 နံနက် - 11:00 နံနက် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) ;by email or online chat - ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
လုံလုံခြုံခြုံအင်တာနက်ငွေပေးငွေယူအပြောင်းအလဲနဲ့ကျွမ်းကျင်သူ, Olorra စီမံခန့်ခွဲမှုလီမိတက်, provides transaction services to SlotsLtd.com.
When SlotsLtd.com members make deposits to their gaming accounts, Olorra စီမံခန့်ခွဲမှုလီမိတက်ဟာပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်တယ်. အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်ငွေပေးငွေယူအောက်ပါအမည်များတဦးတည်းအောက်မှာသင့်ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ် posted ပါလိမ့်မည်ငွေတောင်းခံလွှာပါလိမ့်မယ်:
အမည်များကိုအထက်တစ်ခါတစ်ရံတစ်မြို့၏အမည်နှင့်အတူထင်ရှားစေခြင်းငှါ. ဒီအကြောင်းပြချက် Olorra စီမံခန့်ခွဲမှုလီမိတက်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဘဏ်စနစ်တံခါးပေါက်များနံပါတ်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်ကစားသမားမေလ, by providing written notice to SlotsLtd.com, တစ်နေ့လျှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သိုက်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထား, တပတ်သို့မဟုတ်လ.
A written notice fromaregistered player settinganew deposit limit or reducing an existing deposit limit has effect upon its receipt by SlotsLtd.com, သို့မဟုတ်အဖြစ်မကြာခင်နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်သကဲ့သို့.
အထက်ပါ section အောက်တွင်တစ်သိုက်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သူတစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်ကစားသမား 1 နိုင်, by providing written notice to SlotsLtd.com, increase or revoke the deposit limit afteraminimum waiting period of seven (7) တောင်းဆိုချက်၏အချိန်ကနေရက်ပေါင်း, ကန့်သတ်သုညသတ်မှတ်ထားမဟုတ်လျှင်.
SlotsLtd.com will not acceptadeposit fromaregistered player contrary toalimit set for that player under this Part. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ for self limitation.
Become an Affiliate –; ငွေရယူနိုင်သော
Copyright ©; 2018, slots, Ltd. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.